Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Sida Loogu Soo Xulo Qasabada Musqushaada
2020 / 11 / 16 QoondayntaTilmaamaha qasabada 11543 0
Si aad ugu raaxeysato jilicsanaanta iyo jiritaanka caafimaad ee musqushaada, xulashada qasabad aad u wanaagsan ayaa hubaal ah inay aad muhiim u tahay. Hoos waxaad ku baran doontaa sida loo doorto tuubbo cabsi badan.
Noocyada qasabaddu waa inay caafimaad qabaan saxanka, saxanka ama qubeyska. Tuubada waa inay qaabeeysaa godka wiishka ee saxanka (hal god ama seddex god). Waxay kufiicnaan doontaa in qaababkoodu siman yihiin.
Tubbada waxay leedahay qaabab iyo shaqooyin kala duwan. Iyaga oo adeegsanaya, waxaa laga yaabaa in loo ilaaliyo sida qasabad biyo-mareenka, qasabadda jikada, tuubada tubbada, tuubada qubeyska, iyo wixii la mid ah. Hawsha ayaa u oggolaanaysa iyaga in loo kala sooco sidii qasabadaha caadiga ah, qasabadaha dareemayaasha kombiyuutarka, iyo qasabadaha heer-kuleedka, iyo wixii la mid ah. Tusaale ahaan: Tubooyinka otomaatiga ah ee leh dareemayaal otomaatig ah waxay leeyihiin shaqooyin biyo ah, faraha u dhow qasabada ka dib marka ay si otomaatig ah biyo uga baxaan. Waa cufan tahay oo sahlan, ku habboon musqulaha meelaha dadweynaha. Ka hel macluumaad dheeri ah oo ku saabsan tan ama mowduucyada la midka ah wowow qasabad.
Kateetarka waa wadnaha wadnaha qasiyaha qasabada. Kaydadka dhoobada dhoobada waa kartoon tayo sare leh. Tubbada heerka koowaad ee sare waxay ka kooban tahay keliya guntimaha dhoobada dhoobada ah. Dhammaan qasabadaha la yaabka leh waxaa loo isticmaalaa gulufyada dhoobada dhoobada laga yaabo in la qaadi karo oo ay fududahay in la shaabadeeyo. Kaydadka dhoobada ayaa la isticmaali karaa 30 illaa 50 milyan oo tusaale ama dheeraad ah. Qasabadda macquulka ah ee qiimaheedu qaaliga yahay waxay isticmaashaa shaabad naxaas ama caag ah oo leh cimri gaaban hase yeeshe qiimo hoose.
4. Dusha sare fiican
Markaad soo qaadato qasabad, waa inaad ka feejignaataa dhalaalka dusha sare. Ma jiri karaan bur bur, godad, baro oksaydh, iyo wixii la mid ah.
Qasabada xad dhaafka ah ee heerka koowaad waa in lagu sameeyaa talaabooyinka soo socda. Jirka naxaasta ah ee qasabadda ayaa laga been abuurtay naxaas. Ka dib fiiqista, seddex lakab oo dusha sare ah ayaa la duubay. Marka hore waa maar aashito. 2d waa nikkel Qaybta xiritaanka ee aan ku arki karno dusha sare waa chrome. Tubbada jaban ayaa ka boodaysa lakabka naxaasta aashitada ah. Waxaa jira heerar heerarka daahan. Dhammaan qasabadaha saxda ah waxay u baahan yihiin inay ka boodaan tijaabada buufinta milixda ee dhexdhexaadka ah si loo hubiyo in sheyga uusan miridhmin muddo. Qaabkan tubada cajiibka ahi had iyo jeer u iftiimin karto ka dib isticmaalka muddada dheer.
5. Hubi qaybaha
Si tartiib ah u wareeji la qabsiga si aad u eegto haddii ay maylal khafiif ah u eg tahay. Hubi dhammaan qaybaha qasabadda, gaar ahaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee kulanka. Looma baahna inuu jiro dareen bilaash ah.
6. Shuruudaha Haydarooliga
Baahiyaha la doorbido ee cadaadiska biyaha guriga waa ugu yaraan eber.05 MPa (0.5kgf / cm2). Tubbada waa in loo adeegsadaa culeys ka yar kan. Haddii muddo ka dib aad aragtay in waftiga biyuhu hooseeyo, waad furi kartaa tubbada tubbada si aad u nadiifiso waxyaabaha wasakhda ah. Taas ka dib, socodka biyaha waa inuu ahaadaa mid caadi ah.
Hore:: Sida loo Xulo Qasabada Musqusha Next: Sida loo Iibsado Tuubada Jikada Cusub
2021 / 05 / 13 121
2021 / 05 / 09 2705
2021 / 05 / 08 1932
2021 / 02 / 04 18377
2021 / 02 / 03 17889
2021 / 02 / 03 14052